AMBATONDRAZAKA : FITSIDIHANA NATAON’DRAMATOA MINISITRA LEFITRA MISAHANA NY TANORA. – Ministère de la jeunesse et des sports
Tonga nanome voninahitra ihany koa ny Foara kaominaly izay nisokatra tamin’ny fomba ofisialy anio izy ary nitsidika ireo trano heva isan-karazany. Nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony dia nanambara izy fa akaiky ny fony ny tanora rehetra ary ny filoham-pirenena dia manome lanja ny tanora.
Tsy diso anjara ireo tanora tao Ambatondrazaka nandritra izao fandalovan’ny Minisitra lefitra misahana ny Tanora izao satria dia nisy ny fihaonany tamin’ireo tanora, fotoana izay nahafahan’ireo tanora nitondra ny hetahetan’izy ireo.
Tsy adinony ihany koa ny nandalo tao amin’ny biraon’ny Fitaleavam-paritry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena Alaotra Mangoro, ary nandritra izany no nanolorany solosaina miisa enina ho ampiasaina ho fampandehanana ny asa.
Nanambara izy fa ho fanamby ny hanatsarana ny Tranoben’ny Tanora eto Ambatondrazaka ary hojerena akaiky ny mahakasika izany.
Teo am-pamaranana dia nisy ny fanolorana mari-pankasitrahana ireo tanora nahavita fiofanana informatique nokarakarain’ny Association AJED MADA, sy ireo nahavita fiofanana mahakasika ny famoronana asa sy fananganana orinasa izay noentin’ny orinasa TourDAlaotra izay samy natao tao amin’ny Tranoben’ny Tanora Ambatondrazaka.
KIANJA BAREA : NAHAZO FAHAFAHANA MAMPIDITRA MPIJERY